Dhaxalsugaha Sacudi Carabiya oo lagu eedeeyay inuu jabsaday taleefanka Milyaneero Maraykan ah - Jowhar Somali news Leader
Home News Dhaxalsugaha Sacudi Carabiya oo lagu eedeeyay inuu jabsaday taleefanka Milyaneero Maraykan ah
Dhaxalsugaha Sacudi Carabiya oo lagu eedeeyay inuu jabsaday taleefanka Milyaneero Maraykan ah
Khubaro dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo Qaramada Midoobay ka socday ayaa dalbay in baaritaan deg-deg ah lagu sameeyo eedeymo la xiriira in Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacudi Carabiya uu jabsaday taleefanka gacan qaadka ah ee uu leeyahay madaxda shirkada Amason Jeff Bezos.
Sidoo kale khubarada ayaa dalbaday in la baaro Maxamed bin Salman weeraro toos ah oo uu ku qaaday dadka uu aaminsan yahay inay mucaaradka ku yihiin.
Dhaxalsuge Maxamed bin Salman ayaa lagu eedeynayaa in farriin laga direy taleefankiisa loo adeegsaday in lagu jabsado taleefanka madaxa Shirkada Amazon.
Hase yeeshee,safaarada Sacuudiga uu ku leeyahay Maraykanka ayaa eedeymahan ku tilmaantay kuwo aan macaquul ahayn oo xaqiiqda ka fog,waxayna ku baaqday in baaritaan la sameeyo.
Xiriirka u dhexeeya Sacudiga iyo Maalqabeenka Bezos oo leh wargeyska Washington Post ayaa xumaaday kadib markii lagu dhex diley qunsuliyada Sacudiga ee dalka Turkiga Jamal Khashoggi oo wax ku qori jirey wargeyska Washington Post sanadkii 2018.
Boqortooyada Sacudi Carabiya ayaa dilka Khashoggi waxa ay ku xukuntay dil shan ruux oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkiisa.
Taleefanka Mr Bezos ayaa la jabsaday kadib markii farriin WhatsAppka ah laga soo direy bishii May 2018 taleefan uu lahaa Dhaxalsuge Maxamed bin Salman sida ay daabacday The Guardian oo warkan kashiftay.
Dhaxalsugaha iyo Madaxa Shirkada Amazon ayaa lambaradooda wadaagay bil kahor inta aan fariinta loo firin Mr Besoz tan iyo markaasna waxaa laga qaatay xog badan taleefanka Besoz.